Archive du 20170517
Andry Rajoelina Ireo antony mampangina azy�
Mampametra-panontaniana ny maro ny fahanginan�i Andry Rajoelina amin�izao satria tsy hita ao anaty tabilao mihitsy ny tenany eo amin�ny tontolo politika.
Antenimieram-pirenena Tsimbazaza Ny fitoniana no ilaina, hoy ireo depiote
Nilaza ho tsy mbola nisy nahita �motion de censure� misy miketriketrika izany ireo solombavambahoaka izay nanontaniana teny amin�ny Lapan�i Tsimbazaza, omaly talata 16 mey 2017.
Fanagadrana an�i Fernand Cello Tsy mitombina, nivoaka ny porofo
Namoaka taratasy ny Banky BFV Fianarantsoa fa tsy nahazo taratasy fanoherana na fitarainana momba fahaverezana taratasim-bola mitondra ny laharana CC27165026 tamin�ny 6 septambra 2015.
Taratasin�i Jean Mody mitapy indray !
Miarahaba an�i Jean indray ny tenanay ! Ny hampiala voly anay ve no tanjonareo ity sa handrebireby fotsiny izao e !
Filohan�ny SMM Nisava ny efitranon�i Claudine R
Nidina nanao fanamarinana teny amin�ny hopitaly HJRA Ampefiloha amin�ny maha mbola eny an-toerana na tsia an-dRazaimamonjy ny Filohan'ny Sendikan'ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM), Faniry Ernaivo omaly.
Ny fitsarana no fositra
Tsy mahagaga raha tsy voafehy ny fitsaram-bahoaka. Na manao mafy ny asany amin'ny fanadihadiana aza ny mpitandro ny filaminana dia ny eny amin'ny fitsarana indraindray no fositra raha ny valim-pitsarana nivoaka omaly talata 16 mey 2017 tao Antsirabe ka nampimenomenona ny voakasika.
Tolo-tanana ho an�i Andry Ratovo Maro ireo namaly ny antso
Fahombiazana, tamin�ny ankapobeny no azo tamin�ilay hetsika tolo-tanana ho an�ny namana mpanao gazety Andry Ratovo, izay natao omaly, tetsy amin�ny Tahala Rarihasina Analakely.
Aretina habokana Marary 1700 vaovao indray no fantatra tamin�ny 2016
Mitombo hatrany ireo olona lasibatry ny aretina habokana eto Madagasikara. Marary vaovao miisa 1700 indray no fantatra tamin�ny taona 2016
�Vitrine de Madagascar� eny Iavoloha Nofohazina ny tetikasan-dRavalomanana
Nitsidika ny antsoina hoe �agro-�conomie� iandraiketan�ny GSDM (Groupement Semis Direct Madagascar) tao amin�ny saha sekoly eny Iavoloha ny filohan�ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina omaly.
Mpaninjara solika Tokana ny orinasa mpamatsy
Tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana mahefa no mampitotongana sy mampivarilavo ny fiainan�ny mponina eto Madagasikara, hoy ny profesora Ralison Roger.
Mpianatry ny oniversite Mitaky fampiakarana 100% ny fampitaovana
Nivoaka ny faritry ny oniversite amin�izay nanomboka omaly tamin�ny 10 ora ireo mpianatry ny oniversiten�Antananarivo ary tonga nanatevin-daharana azy ireo koa ireo mpianatry ny polyteknika eny Vontovorona.
NJAKATIANA Mankalaza ny faha-25 taona niakarany an-tsehatra
Mankalaza ny faha-25 taona niakarany an-tsehatra i Njakatiana. Fampisehoana goavam-be hotanterahina eny amin�ny Coliseum Antsonjombe
Asan-dahalo sy fanafihana fiara Olona 4 nahatrarana basy 2
Olona 4 nitahiry basy 2 izay fanaovana fanafihana amin�ny fangalarana omby sy fanafihana fiara amin�ny fanakanan-dalana no saron�ny zandary tao Fierenana kaominina ambanivohitra Ambatomanoina ny alahady 7 mey 2017 lasa teo.
Hivoaka amin�ity herinandro ity ny tolo-bidy amin�ny fanamboarana sy fanitarana ny seranan-tsambon�i Toamasina.